Rajada Doorasho Ee Saciid Deni Intee Le'eg Tahay? » Axadle Wararka Maanta
Rajada doorasho ee Saciid Deni Intee le’eg tahay?
Rajada doorasho ee Saciid Deni Intee le'eg tahay?
Muqdisho (Axadle) – Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullahi Deni ayaa ku jira olole doorasho oo aan shaacsaneyn, oo uu ku doonayo xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Ilo wareeeyo kala duwan ayaa Axadle u sheegay in Saciid Cabdullaahi Deni uu dhigiisa Jubaland Axmed Madoobe kala hadlay in uu ka shaqeeyo sidii ay doorashada Jubaland ugu soo bixi lahaayeen Xildhibaano lagu kalsoonyahay oo uu ka heli karo codad.